Indlu yaseYurophu ephefumlelweyo yendoda leyo
ibuyiselwe ngothando kwaye yenziwe yangoku ukuze uthuthuzeleke, amava kunye nokubaleka ekugqibeleni.
Siyimizuzu esuka entliziyweni yeBlue Mountain, i-Niagara Escarpment, iBruce Trail, i-Beaver River, i-Scenic Caves, i-Eugenia Falls kunye nezinye iindawo ezishushu.
Indawo yakho yokuhlala yiyo yonke 'iManse'-i-1000 sqft yendlu esandula ukulungiswa edityaniswe kwisakhiwo ebesityunjwe ngokwembali esasetyenziswa phantse iinkulungwane ezimbini njengeCawa eManyeneyo.
Wamkelekile kuMaxwell Manse. Siluphawu lwembali lwaseKhanada olubuyiselwe ngothando olunikezelwe ekugcineni iindawo ezityebileyo zelifa lemveli ngelixa uziqhelanisa nobuhle bemihla yethu.
Ngamava awodwa ngokwenene ukuvuka usiva isandi sehashe elidlulayo kunye nenqwelo yenqwelo kwindawo ethe yahlala ixesha elide kangangeenkulungwane ezimbini.
Ekuqaleni le ndlu yemanse yayisetyenziswa njengendawo yesitali kwiminyaka yoo-1800s nasekuqaleni kweyee-1900 ukuze amalungu asekuhlaleni apakishe amahashe awo phambi kokuba akhiwe kwindawo yokuhlanganisana kunye nokuba umfundisi ahlale kuyo. ukusuka kumaplanga athatyathwe kwiindawo ezizinzileyo zantlandlolo ezisukela phakathi kwiminyaka yoo-1800.
I-manse iza inekhitshi eligcweleyo, kuquka isitovu segesi se-oveni ezintandathu ezitshisayo eziphindwe kabini, ifriji nesikhenkcezisi, umenzi wekofu, iimbiza neepani, izitya, i-cutlery, ipani enkulu yokuqhotsa, kunye nezinto zokupheka.
Ikhaya linqanaba elinye elivulekileyo lengqikelelo ngenxa yenjongo yalo yangaphambili yolwakhiwo ukuba yindawo ezinzileyo. Igumbi lokuhlala lincanyathiselwe ekhitshini kwaye line-72” yeTV exhonywe phezulu apho iindwendwe zikwazi ukuhlala kamnandi kwindawo entle yaseItali yeProvincial edityanisiweyo ende yesofa/igumbi lokuphumla elaqala ekuqaleni kwenkulungwane yama-20. (Singabantu abathanda izinto zakudala ngoko ke ezo nkcukacha zenza ukuba iintliziyo zethu zibethe ngokukhawuleza!)
Kukho amagumbi amabini ahlukeneyo, omabini aneengcango zebhodi etyibilikayo. Elinye igumbi linebhedi elingana nendlovukazi kunye nelinye ikumkani. Omabini amagumbi anamagumbi okuqonda avulekileyo, izibuko kunye neetyhubhu zezinto zomntu.
Igumbi lokuhlambela elisanda kulungiswa lineshawari, kunye nebhafu encinci yeenyawo. Ibhafu yeyoqobo kwisakhiwo semanse kwaye yenziwe yaze yabuyiselwa ukuze isetyenziswe. Kufanelekile ukukhankanya ukuba ibhafu incinci kakhulu ngobukhulu.
Indawo yethu yangaphandle inepatio egqunywe yi-pergola enesihlalo sothando, isitulo esijikelezayo, indawo yokuphumla kunye ne-ottoman yokuhlala kwaye ujabulele ngaphandle. Kukwakho nedekhi yomsedare yabucala ene-BBQ ejonge kumgodi wethu womlilo oneebhentshi ezimbini kunye nezitulo ezibini.
Indlu isandula ukugqunywa kwaye ifudunyezwe ngesithando somlilo esandula ukufakwa sepropane kunye nesifudumezi samanzi. Kukho indawo yomlilo yombane kunye nesifudumezi sendawo yohlengahlengiso lobushushu bomntu.
72" HDTV ene-I-Amazon Prime Video, I-Netflix
Asihlali kwindawo, nangona kunjalo ziyafumaneka kwiindwendwe zethu ngetekisi kwaye ukuba kuyimfuneko zinokufumaneka ngobuqu.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Maxwell